१९५० को सन्धि पुनरवलोकन चाहँदैन भारत - Bartamansamaya
१९५० को सन्धि पुनरवलोकन चाहँदैन भारत
काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य महेन्द्र पी. लामाले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले के परिमार्जन गर्न चाहेको हो भन्ने प्रस्ट पार्न नसकेको बताएका छन् ।
‘हामीले शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान रहेका धारा अध्यावधिक तथा पुनरवलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक रहेको जवाफ दिए पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको अवस्था छैन । -डा.भेषबहादुर थापा, इपिजीमा नेपालतर्फका संयोजक
‘नेपालले अहिलेसम्म सन्धिको कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ भनेर प्रस्ट बताउन सकेको छैन । स्पष्ट भएर आउन सकेको खण्डमा छलफल गर्न भारत तयार छ । -महेन्द्र पी. लामा, (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य
समूहमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र आचार्य सदस्य छन् । भारतका तर्फबाट जयन्त प्रसाद, लामा, भुवनचन्द्र उप्रेती र कोसियारी सदस्य छन् । उक्त समूहले नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।
यसो भन्छन् महेन्द्र पी लामा
एउटा ठूलो सोचसाथ भारत-नेपाल सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनाले प्रबुद्ध समूह गठन भएको हो । अबको ५० वर्षसम्म भारत-नेपाल सम्बन्ध कस्तो बन्नुपर्छ भनेरै दुई देशका प्रबुद्ध समूहका व्यक्तिले एउटा रूपरेखा तयार गरौं भनेर लागेको हो । भारत सरकार र प्रशासनले मान्छ÷मान्दैन अर्को कुरा भयो तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजार व्यवस्था एउटै हुनुपर्छ । आज नेपालमा भनिन्छ कि कोलकाताबाट सामान आउँदा यसरी रोक्छ, अप्ठ्यारो पार्छ भनेर । बजार नै साझा बनाइदिऔं । अंग्रेजीमा ‘कमन मार्केट’ भनिन्छ । नेपालले भारतका जुनसुकै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरौं ।
बंगलादेशको मंगला र चिटगाउँबाट नेपालले व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाऔं । तर, यस किसिमको कुरो अहिलेसम्म सोचिएको छैन । यसो भन्दा यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भन्ने कुरा आउला । तर, युरोपमा हेर्नुहोस्, जर्मनी, फ्रान्स, इटली सबैले खुला बजारको अवधारणा ल्याएका छन् । नेपालले अहिलेसम्म प्रस्ट रूपमा सन्धिको विषयमा आफ्नो कुरा राखेको छैन । नेपाल कुन-कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ त्यो प्रस्ट रूपमा आएको छैन ।
भारतले कुन-कुन धारामा परिवर्तन चाहन्छ ? त्यसबारे आफ्नो कुरा राख्नेछ । मैले अहिलेसम्म एउटै दस्ताबेज देखेको छैन, जहाँ नेपालले सन् १९५० को सन्धिको यो धारामा हामी यो कुरा राख्न चाहन्छौं भनेको होस् ।
सन्धिलगत्तै नेपाल-भारतबीच पत्राचार भएको छ । पत्रमा प्रस्ट लेखिएको छ कि ‘नेपाल सानो राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले भारतजत्तिकै कुरा व्यहोर्न सक्दैन । जबसम्म नेपाल यो कुरामा राम्रोसँग अघि बढ्न सक्दैन तबसम्म भारतले यो कुरामा फाइदा उठाउनुहुँदैन ।’ त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छैन । मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म जे भयो-भयो।